Mercury misy sakafo | Nutri Diet
Mercury dia hita voajanahary ao amin'ny rivotra, tany ary na dia ao amin'ny AguaNoho io antony io dia takarina fa ny biby ary na ny tenantsika aza dia mety manana fatra kely merkiora ao amin'ny vatantsika.
Mila mitandrina tsara ianao amin'ity singa ity satria mety hiteraka aretina tena lehibe, toa ny Parkinson's, Alzheimer na ny autiste. Tamin'ny voalohany, famenoana nify maro no misy merkiora 50% amin'ny endriny, tranga izay mampatahotra olona ankehitriny.
Ny Mercury dia miseho voajanahary, na izany aza, ny habetsaky ny planeta manana an'io akora io dia vokarin'ny asan'ny olombelona, ​​avy amin'ny fandoroana arintany ao amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra, lakozia famokarana indostrialy, Etc.
1 Ny Mercury dia misy amin'ireo vokatra sy sakafo ireo
2 Raha mitelina mercury isika, inona no mitranga?
Ny Mercury dia misy amin'ireo vokatra sy sakafo ireo
Pesticides sy herbicidesIreto vokatra roa ireto dia "ilaina" hitazonana ny vokatra tsy misy bibikely ary tsy hanimba azy ireo, fa kosa mampiditra merkurialy ny sakafo laninay avy eo.
ny sasany makiazy natao hanamaivana ny volon-koditra
Famonoana otrikaretina sy fanafody
Batterie, batterie, thermometers, fantsom-boasary sns
Trondro: ireo izay manana merkiora betsaka indrindra dia ny tuna, ranomasina, antsantsa, trondro. Ny sasany izay misy nefa vitsy dia ny sardine, ny tery ary ny tery, na dia tokony hamafisintsika aza fa mila mihinana trondro be dia be isika hanimba antsika.
Raha mitelina mercury isika, inona no mitranga?
ny vokatra misy poizina izy ireo dia hiankina amin'ny taonan'ny olona izay mihinana azy sy ny fomba nanangonana azy io. Tsy mitovy izy io, maka azy mivantana fa tsy mifoka azy, ohatra. Raha fofonaina isika, dia voakasik'izany ny rafi-pandevonan-kanina sy ny rafi-pitatitra miaraka amin'ny havokavoka.
Raha mitroka ny merkiora dia afaka mijaly isika fangovitana, fahaverezan'ny fahatsiarovana, tsy fahitan-tory, tsy fahombiazan'ny voina, ny motera ary ny tsy fitovizan'ny kognita.
Raha ao anatin'ny vanim-potoana fiterahana ianao, tena zava-dehibe ny manalavitra ny vokatra mety misy azy satria afaka io singa io misy fiantraikany mivantana amin'ny fampandrosoana ny foetus.
Tsy hadalana izany, tsy maintsy ataontsika mitandrema ary miambena, karakarao ny kely mba tsy hilalaovany ny vokatra misy azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Sakafo misy merkiora